Hacking: Ọ bụghị naanị ịme ihe ka mma kama iche echiche ka mma banyere ihe | Site na Linux
Site na edemede anyị gara aga metụtara isiokwu «Hacker» akpọ «Mmeghari Yiri: Ọ bụrụ n’anyị jiri sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, anyị abụghị ndị na - egwu egwu?»N'ime nke anyị na-ekwu maka Gịnị bụ Hacker? anyị tụlekwara nkenke banyere mbugharị nke oge a, ebumnuche ya, mkpa ya na nha anya ma ọ bụ mmekọrịta ya na Free Software Movement, Anyi nwere ike weputa echiche nke etiti a: “Hacker na eme ihe kariri ndi ozo dika ha nwere ike n’ihi na o na-eche ihe ka mma ma nuzo di iche”.
Ọ bụghị naanị na ndị na-agba ọsọ na-eme ihe ka mma ma ọ bụ ihe ịtụnanya, ya bụ, ọ bụghị naanị na-edozi nsogbu na / ma ọ bụ na-ewu ihe ọhụụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ahụ siri ike ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume, mana site na ime ha, ha na-eche echiche dị iche na nke nkeziNke ahụ bụ, ha na-eche n'echiche nke "nnwere onwe, nnwere onwe, nchebe, nzuzo, mmekorita, ịkọcha mmadụ." Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ onye na-egwu egwu, ị ga-akpa agwa dịka amamihe ụwa a siri chọọ, buru omume ahụ n'ime onwe gị, mee ya akụkụ dị mkpa nke ịdị adị gị.
2.1 Anataghị ikike anyị
2.2 Hacking usoro na ozi anyị na-eri
Mana ọ bụrụ n’echiche maka ịzụlite akparamagwa nke “Hacker” ọkachasị ma ị bụrụ “Onye hụrụ Software n’anya efu” ma ọ bụ dị ka onye Mmepụta ma ọ bụ Onye ỌrụDịka ụzọ ịnata nnabata na ụwa ị na-arụ ọrụ, ị na-emehie.
Na-eme ma na-eche echiche dị ka Hacker, na-abụ ụdị onye kwenyere na ọtụtụ ma ọ bụ ihe niile nwere ike ịbawanye mma na enwere ike ịka mma, na na ọ na-eme ihe dị ike iji mee ka ihe ndị ahụ kwe omume maka ọtụtụ ndị ọkachasị, bụ ihe kwesịrị ijere anyị ozi na nke mbụ iji mụta ma mee ka anyị nwee mkpali, ma nye anyị ohere inyere ndị ọzọ aka.
Ya mere, ụzọ kachasị dị irè iji bụrụ onye nkuzi bụ i imitateomi echiche nke ndị nkuzi, ọ bụghị naanị na ọgụgụ isi, kamakwa n'ụzọ mmetụta uche. Ya mere na-emeghe uche na-agụ / ide nke enweghi ngwụcha isiokwu si dị iche iche si ele ihe anya, ka ndị dị iche ma ọ bụ na-emegide echiche, na-agaghị ekwe omume ma ọ bụ na-ekwekọghị n'ụkpụrụ na echiche dị oké mkpa iji nwee mmụọ Hacker.
Anataghị ikike anyị
Ekwesịrị m ịdọ gị aka na ntị gbasara ihe. Enwere m àgwà ọjọọ nke na-echebara ajụjụ echiche tupu m azaa ya. David Perkins, bụ ọkachamara prọfesọ na agụmakwụkwọ na Harvard na ọkachamara na mmụta, nghọta na ihe okike.
Kwa ubochi, ndi mmadu na-enwe otutu echiche di nma ma otutu adighi nma. Nke a na - eme ka anyị nwee ohere sara mbara na ndụ anyị ịga na ụzọ na - ezighi ezi site na ịghara iche echiche nke ọma banyere ozi anyị na - eri banyere akụkụ dị iche iche nke ndụ: mkpebi onwe onye, ​​ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, echiche ọgụgụ isi na ọnọdụ okpukpe.
Nke bụ eziokwu bụ na ụwa bụ ebe dị mgbagwoju anya ebe ndị mmadụ na-atụkarị uche maka isiokwu dị iche iche, n'ụzọ na-ezughi oke maka etu esi kee ozi, bufee ya ma mekwaa ya aka. Ndị mmadụ na-echekarị banyere ihe ọmụma nke isiokwu ndị a na-eri eri n'ụzọ dị otú a mgbe niile na-agbanye ha ma na-eche echiche tupu ha emee ihe omume n'otu ozi ahụ, si otú a na-eme ka echiche nke "nduhie onwe onye nwee obi ụtọ."
Ọ bụ ndị na-enwe obi ụtọ na otu echiche ma ọ bụ isiokwu na-enwekarị obi ụtọ ịnweta ozi na-eme ka echiche ahụ ma ọ bụ isiokwu ahụ sie ike, nke, ọ bụrụ na ọ bụ echiche na-ezighi ezi ma ọ bụ isiokwu a na-achịkwa, na-eme ka nkwenkwe ụgha nke ya na-eme mgbe niile n'etiti mmetụta na-enweghị atụ nke obi ụtọ.
N'ihi ihe a, Nzọụkwụ dị mma kwesịrị ịbụ "ịgbanye uche anyị", na okwu ndị ọzọ anyị ga-"zụrụ onwe anyị" iji lebara ihu dị iche iche nke echiche, isiokwu ma ọ bụ ọnọdụ. Gbalịa itinye onwe anyị n'ọnọdụ nke ọzọ ma ọ bụ n'akụkụ ọzọ nke echiche, isiokwu, ọnọdụ ma ọ bụ otu. Gbalịa ịkọwapụta onwe anyị n'ime nyocha, gosipụta ahụmịhe ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Inye echiche iji nwee nkatọ kariri ọgụgụ isi banyere ihe ndị gbara anyị gburugburu.
N'etiti nhọrọ abụọ, họrọ nke atọ. David Perkins
Ajụjụ banyere ntụkwasị obi nke isi mmalite nke ozi anyị na-eri, na-ejikarị iche echiche “Site na igbe ahụ” (Site na igbe ahụ), hapụ echiche na-agaghị agbanwe agbanwe, enweghị ntụkwasị obi na ebighi ebi, nke n'ozuzu ha na-abụ nke akụ na ụba - Ọchịchị - Religdị Okpukpe ", usoro n'etiti ndị ọzọ na-enyere anyị aka imeghe uche anyị maka ikike na ohere ọhụụ na-enweghị atụ.
Mụta iche echiche nke ọma na-enyere anyị aka ime nke ọma n’ihe mgbaru ọsọ anyị. Ihe dị na ya bụ ịmata ka esi ekpebi ebe anyị ga-etinyekwu echiche na mbọ anyị, na-akwado azịza na uru mkpokọta ebe otu gụnyere, ọ bụghị ebe otu onye bụ naanị ya. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị kwesịrị ịka mara ihe ma a bịa n’iche echiche.
Hacking usoro na ozi anyị na-eri
N'ime ụwa nke nwere ọtụtụ data dị ukwuu, nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ teknụzụ ghọtara n'oge na-adịghị anya na ọ bụ naanị otu ihe bara uru: uche anyị. Tristan Harris, onye bụbu onye ọrụ Google.
Ndị ụlọ ọrụ teknụzụ (Internet, Kọmputa, TV, Mobiles, Social Networks na Ozi / Nkwurịta Okwu) ha na-eme ka ihe ịga nke ọma nke akụ na ụba nke ụdị azụmaahịa ha site na ịdọrọ uche ndị ọrụ ha na ịkpụzi omume na echiche ha. Ihe mgbaru ọsọ gị: Debe ndị mmadụ ruo ogologo oge o kwere mee site na iji ngwaahịa, ọdịnaya na ozi gị. N'ihi gịnị? Ego na Ike.
Ihe anyị na-elekwasị anya bụ ọnụ ụzọ ámá ndị ọzọ (Companlọ ọrụ Nkà na Technologyzụ na Ndị Ọchịchị, n'etiti ndị ọzọ) gaa na ụwa anyị, na uche anyị, mmetụta uche, mmetụta na ọbụna mkpebi anyị. Ndị niile na-asọ mpi iji nweta nko. Oge ọ bụla iji usoro dị irè karị, na-eme ka anyị nwekwuo ahụ ike na isi mmalite nke ozi na afọ ojuju ozugbo, na-ekewapụ anyị n'etiti ụmụ mmadụ ndị ọzọ na gburugburu ụwa anyị.
Aghọghị onye na-anabata ndakpọ olileanya, nke mmetụta nke nnabata na nnabata, nke na-eduga anyị ịzụlite echiche na-adịghị mma, na-adabere n'ihe ndị pụtara ìhè na-ekpughe na gburugburu mmekọrịta ọha na eze.
Ọ bụ ya mere ịbụ onye Hacker pụtakwara "iche echiche ka mma." Echiche kachasị mma nke gụnyere ịzere ịbụ ndị e megharịrị, kwenye, na / ma ọ bụ ịchịkọta site na ịgbado uche anyị, site na itinye n'ime anyị omume, mmetụta ma ọ bụ nzaghachi nke ndị ọzọ chọrọ, na-enweghị isonye anyị, iji ikpe anyị dị oke mkpa.
Iche echiche ka mma, ime ka mmadụ chee echiche nke ọma, na-abụkarịkwa ọgwụgwọ nke aghụghọ ma ọ bụ nduhie onwe onye. -Mara onwe anyị ebe anyị lebara anya bụ ihe dị mkpa nke uche Hacker. Ntị bụ ọnụ ụzọ nke usoro nkwenye ọ bụla ebe echiche dị oke egwu bụ ngwa na-enye anyị ohere ịkpa oke ozi anyị nwetara n'ụzọ ọ bụla. Becomingmata nghọta nke nghọta anyị na-egosipụta nwere ike ime ka anyị mee mkpebi ndị ka mkpa.
Ọ nwere ike ịdị ka ọ bụ ihe ọchị ịbụ Hacker, Na-eme ihe ndị na-agba ọsọ na-eme, Na-eche echiche dị ka Hacker, mana eziokwu bụ na Beingbụ, Ime na Iche Echiche Dị ka Hacker bụ ụdị egwuregwu na-achọ ọtụtụ mgbalị na mkpali. Onye hacker ga-eche ma ọ bụ nwee ụdị nke obi, ebumpụta ụwa, obi ụtọ mgbe ọ na-edozi nsogbu, na-asọpụrụ ikike ya, na-egosipụta ọgụgụ isi ya, na-ajụ eziokwu ya ma na-ekwenyeghị mgbe niile na ihe ndị dị mkpa n'ụwa ugbu a, na usoro, nke ndị ọzọ ịbụ ndị anaghị ahụ anya ma ọ bụ na-adịghị mkpa, ma ọ bụ ka njọ, na-adị mma ruo mgbe ebighi ebi, na-adaba adaba, ma ọ bụ na-eme ihe n'ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịkọwapụta ụdị onye Hacker, dị ka ebumnuche ha "Anti-System".Mana ịrụsi ọrụ ike na ịrara onwe ha nye ihe ndị ha hụrụ n'anya na-abụkarị ụdị egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ, ọ bụghịkwa ihe omume oge niile maka ha. Àgwà ahụ dị mkpa iji ghọọ onye na-egwu egwu.
Anyị na-atụ anya na akwụkwọ a "Tetanụ na Hacker ahụ onye ọ bụla nwere n'ime" na-enwe olileanya ime nnukwu ihe maka ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Hacking: Ọ bụghị naanị ime ihe ka mma kama iche echiche nke ọma banyere ihe
Izu izu zuru oke. $ -> Obi ụtọ_Hacking
Zaghachi Alberto Cardona
Obi dị m ụtọ na ị masịrị ya, ana m ekele gị maka okwu gị dị mma.
E wepụlarị Git 2.21.0 ọhụrụ ahụ ma ndị a bụ akụkọ ya
Ndị na-ede blọgụ: Ndị ọkachamara nke Ọdịnihu. N'etiti ọtụtụ ndị ọzọ!